अब कक्षा ११ र १२ को वार्षिक कार्यतालिका कस्तो ? हेर्नुस् – Everest Dainik – News from Nepal
अब कक्षा ११ र १२ को वार्षिक कार्यतालिका कस्तो ? हेर्नुस्
काठमाडौँ, भदौ १२ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को भर्नादेखि परीक्षा र नतिजा प्रकाशनसम्मको वार्षिक कार्यतालिका बनाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक भर्नादेखि परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने बेलासम्मको कार्यतालिका तय गरेको हो ।
मुलुकभरका शिक्षण संस्थामा एकरूपता कायम गर्न र कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न कार्यतालिका तोकिएको जानकारी बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले दिए । कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई भदौ मसान्तभित्र रजिस्ट्रेसन फाराम वितरण सुरु गरेर असोज २१ भित्र संकलन गरिसक्ने उल्लेख छ ।
पुस १५ देखि माघ १५ भित्र कक्षा ११ र १२ को नियमित, आंशिक र ग्रेडवृद्धि परीक्षार्थीको परीक्षा आवेदन फाराम भरिसक्नुपर्नेछ । कार्यतालिकाअनुसार वैशाख र जेठमा सञ्चालन हुने दुवै कक्षाको परीक्षा तालिका माघ मसान्तसम्म प्रकाशित गरेर परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिसक्नुपर्नेछ ।
कक्षा १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा चैत मसान्त र कक्षा ११ को वैशाख १५ भित्र सम्पन्न गरी प्राप्तांक बोर्डको कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने अर्यालले जनाए । बोर्डले बाह्य निरीक्षक नपठाउने विषयको भने विद्यालयले प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी चैत मसान्तभित्र प्राप्तांक पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
ट्याग्स: कक्षा ११ र १२, प्राप्तांक बोर्ड, वार्षिक कार्यतालिका